Shiinaha GD-KB-001 inch 20 inji carruur ah baaskiil, xasiliyayaal baaskiil caddayn daloolin, baaskiil carruur ah, qaab bir ah, baaskiil wiilal, warshad taayirrada tabobarrada iyo soosaarayaasha | GUODA
GD-KB-001 inch 20 inji carruur carbiska, xasiliyayaal baaskiil caddayn daloolin, baaskiil carruur ah, jir bir ah, baaskiil wiilal, giraangiraha tababarka
FOB Qiimaha: US $ 38 / Cadad
Tirada Min.Order: 300 Gabal / Cadad
Carruurtu waxay ku raaxeysan doonaan dabaysha wejigooda iyagoo xawaare ku ordaya laamiga Baaskiilka. Giraangiraha tababarka ballaaran waxay ku daraan xasillooni inta ay fuushan yihiin, waana ay iska fududaan karaan marka ilmahaagu diyaarka yahay.
XARUNTA XARUNTA 20 ″
BASKA BALKA BK
Hore: GD-ETB-018 ： 36v250w Motor, Derailleur SHIMANO 370, Masaafo 60-80 km
Xiga: GD-KB-002 ： 20 inji baaskiil carruur ah oo wata xawaare hal jejebi ah, baaskiil cagaaran, baaskiil wiilal ah, Naqshadeynta qandaraaska
Carruurtu waxay ku raaxeysan doonaan dabaysha wejigooda iyagoo xawaare ku ordaya laamiga Baaskiilka. Waxay leedahay qaab jilicsan waana qaab udhaxeeya udhaxeeya xoreynta curdanka ah. Baaskiilkani wuxuu leeyahay dhammaan qaababka isku midka ah ee qaabka koray, laakiin wuxuu ku habboon yahay nin yar oo aan diyaar u ahayn cabbirka buuxa. Waxaa lagu dhisay bir bir ah oo loogu talagalay adkeysiga waxayna la socotaa giraangiraha tababarka la saari karo ee ku-meel-gaadhka fudud. Baaskiilkan caruurtu wuxuu leeyahay kursi salka ah oo leh suuf wanaagsan iyo bareeg gacmeed si loo hubiyo joogsi aamin ah
caruurta baaskiil wiilasha
caruurta baaskiil buur